Ady amin’ny Coronavirus Tsapaina hafanana ny mpandeha rehetra tonga eny Ivato
Tsy mamela mahazo ny coronavirus, ilay tsimokaretina mamely ny taovam-pisefoana ka mahafaty haingana.
Efa tonga any Frantsa ity aretina ity ankehitriny vokatry ny fisian’ireo olona mivezivezy miainga avy ao Sina…. Manoloana ity tranga ity dia nidina ifotony teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato ny profesora Rakotonirina Julio, minisitry ny fahasalamam-bahoaka ny faran’ny herinandro teo nanara-maso ny fizotry ny asa fiarovana hatao eny an-toerana, ho fiarovana ny ain’ny mponina. Anisan’ny nojereny manokana tamin’izany ny fisian’ireo fitaovana fitsapana hafanana izay misy infra rouge. Raha mihoatra ny 38 ° ny maripanan’ny olona iray dia nomarihin’ny minisitra fa tsy maintsy arahi-maso akaiky izy ary raha ilaina dia entina manatona tobim-pitsaboana efa voatokana mihitsy. Nampitomboina ihany koa ny isan’ireo mpitsabo manara-maso izany ankoatra ny fisian’ny fiara afaka mitondra marary avy hatrany napetraka eny an-toerana. Nomarihin’ny minisitra nandritra izany fa tsy mipetra-potsiny ny fitondram-panjakana manoloana ity karazan’aretina iray mampatahotra ity. Ankoatra an’Ivato, hoy izy dia seranam-piaramanidina sy seranan-tsambo valo hafa ihany koa no arahi-maso akaiky manerana ny Nosy. Na izany aza tsy mbola misy ireo marary ahiana hatreto.